JINGHPAW KASA: မွန်းကြပ်နေတဲ့အရာတွေ မပြောလိုက်ရင် တစ်ခုခုထလုပ်မိမှာစိုးလို့
မွန်းကြပ်နေတဲ့အရာတွေ မပြောလိုက်ရင် တစ်ခုခုထလုပ်မိမှာစိုးလို့
လက်ရှိကချင်ပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေတာ မြစ်ကြီးနား ၊မန္တလေး၊ ပျဉ်းမနား နေပြည်တော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒေသခံကချင်တွေနေတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေပါ။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ဗမာတွေမဟုတ်၊ ကချင်လူမျိုး ၉၉ % ပါ။ ဖျက်ဆီးခံလိုက်၇တဲ့ရွာတွေမှာ ဗမာရွာတွေမပါပါ။ ကချင်တွေနေတဲ့ ရွာတွေပါ။ ကချင်ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း (၁၀၀)ကျော် ပျက်စီး၊ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရချိန်မှာ၊ ဗုဒ္ဓစေတီတွေဘာမှမဖြစ် လေကြမ်းလေးတောင်တိုက်မခံရ။
ကချင်အမျိုသမီးတွေ အသက်( ၉-၅၀) နှစ်ကြား အယောက် ၁၀၀ ကျော် မုဒိန်းကျင့်ခံရပြီးချိန်၊ ဗမာမလေးတွေက ချောင်းထဲရေခပ်မပျက်ခဲ့။ ၁၇/၁ နဲ့အဖမ်းခံ၇တာ မြစ်ကြီးနားမှာ ၅၀၊ မိုးညှင်း ၁၀ ကျော၊် ဗန်းမော် ၁၅၊ မူဆယ် ၁၀ယောက် စုစုပေါင်း ၁၀၀ ခန့်၊ အားလုံးက ကချင်တွေပါ။ ဗမာတစ်ယောက်မှမပါ ။
ကဲ.. ဘယ်သူတွေကထိုးစစ်ဆင်ပြီး..ဘယ်သူတွေက ခုံခံကာကွယ်နေရတာလဲ၊ အစကတည်းက British တွေကတော့ ပြောသား၊ ဗမာတွေနဲ့တွဲပြီးလွတ်လပ်ရေးယူဘို့မလုပ်ကြပါနဲ့.. တဲ့၊ ဆိုတော့.. ရခိုင်ပြည်လို၊ မွန်ပြည်လို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ယူပြီး ဗမာပြည်ထဲ ပါလာတာမဟုတ်.. လုံးဝ သီးသန့် သီးသန့်၊ ပင်လုံကတိကဝတ်ကြောင့်သာ ဗမာပြည်ထဲဝင်လာတာ..။
ကဲ ဘယ်သူတွေကသောင်းကျန်သူလဲ၊ အကြမ်းဖက်နေလဲ?????? အခုလည်းငြိမ်းချမ်းရေးစကားတွေ လျောက်လျောက်ပြောပြီး.ရဟတ်ယဉ်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီ။ အားလုံးထွက်သွားကြ..ထွက်သွားကြ.. စစ်တပ်တွေရဲတွေ.. ကချင်ပြည်သူတွေကျွှေးတဲ့ ထမင်းစားပြီး ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်မှု မပေးနိင်တဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးထွက်သွား၊ ထွက်သွား၊ ထွက်သွား..သွား သွား သွား။
Maran Jaw Gun
မှတ်ချက်။ ။ ဗမာ ဗမာလို့ပြောနေရခြင်းက စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရထိပ်သီးပိုင်းမှာ ဗမာလူမျိုး အများစု ပါဝင်နေလို့ပါ။ ကချင်တွေဒီလိုဖြစ်နေလို ဗမာတွေကိုပြန်ခံစားစေပါဆိုတဲ့ အတွေးလေးတောင်မဝင်ပါ။ ကျွှန်တော်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကပြောထားတာကိုး.. သူများ(အချင်းချင်း)ကို ဘယ်တော့မှ မစီရင်နဲ့၊ ငါဘုရားစီရင်တော်မူမယ်.. တဲ့
very very good right right လို့ ထောင့်ခံလိုက် ပါ တယ် မှန် တယ် အရန်း ကို မှန်ပါ တယ်
ကချင်မြေ ကချင်မြေ အရမ်းပြောနေတယ်
ဘယ်မှာသွားနေရမလဲ ရှမ်းပြည်က ကချင်
Tsawra ai Wunpawng amyu sha ni e, anhteamara ni hpe myitdum hpyi nem ga. Anhteamoi na amyuaningbaw ningla ni, sasana sara niaga nmadat, Hpungaga nmadat ai, Karai matsat ai gawng ngu sumla naw ai ni hpe kam nna mungdan chyawm la aiagawmai gawsha niamajaw rai na sai. Ninggawn madu Awmdawm jaw lu ai Karai hta W.P sha ni yawng myithkrum kyu hpyi let shakut yang anhtealamuga hpe anhte nan madu lu na ga ai law.
ya na zawn lu hti lu ai majaw grai chye ju kaba sai, teng man dik ai lam ni nan rai nga ai
Hkawhkam labau laika 2:15 Dai hpyen labaamajaw myit hkum ru,myit hkum kaji myit dai hyen gasat ai gaw nanhteaamu n,rai,Karai kasang hte seng nga ai. Esaia laika 63:10 Shanhte chyawm gaw gumlau n,na shiachyoi pya ai Wenyi hpe shayawn mu ai:dai re ai majaw ,shi shanhte hpe hpyen wa tai n,na shi nan shanhte hpe hpyen gasat mu ai. Karai kasng kaw W/p ni K.K wa kaw aten shagu hpyinem tawngban kyupyi ga ngu ga saw n,ngai law.
myen ngu ai kaw A Tsu ya hpe tsun ai re na ngu kam ai. ကချင်မှာ နေ သူ သာ အ ဖြစ်မှန် ကိုသိတယ်။ anhte myu sha ni roi rip ai kam sha nga tim lahta de naatsu ya ngu ai kaw shang lawm nga ai wun pawng sha ni n dum nga ai. myu sha ni hpeamyu mat hkra zing ri ai,katsi majan hte yaw ai hpe yawng dum hprang ga. grau na ram ma ni........ yawngatsam nga ai ti nangamanu dan aiaten hpe myuamatu jut shara mi na jawm shang lawm ga.kaga myu hpe sai kum gayau kau alu yaw. A ten angaigaw naw la ga. bum ga de hpa byin ai hpe myo kaaba de nga ai ni hpa n chye ai majaw n kam na tsang ai. jing hpaw mung de nan hte hpe la ding da nga ai yaw. ngai mungamyu shayi sha laangai re majaw nyeamyu hpe tsaw ai. dai zaw sha nan hte yawng mung tsaw nga ga. makawp maga ga , kalem ga ni hpe hkum kam mu. sum tsaw da yang mung myu shada tsaw ai gaw shim lam lu ai. roi ai , dang sha ai hpe chye ning len lawm mat ai hku gaw, yawn hpa re. Yawng gaw K.K kaw shani shagu kyu hpyi shakut ga yaw. Rawt kalu gaba wa ai myusha ni tai ga yaw..........Merry x'mas to you all.
Then Go Back to Shan State........ if you would like to say...
"Shan Land " "Shan Land"
အ တွေး များ ကို ဖြန့် ကျက် ပါ။နွား ခြေ ရာခွက် လောက် မ တွေး နဲ့
မင်းတို့ကတော့ခက်နေပြီကွာ ဘာမှမသိရင်လဲလျှောက်မရေးနဲ့လေ ဒီစာတွေက တစ်ကမ်ဘာလုံးဖတ်နေတာ အခုဒုက်ခသည်တွေထဲမှာ ဗမာက ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းပါ နေတာကွ ဖားကန့်ဘက်ဆိုရင် ဗမာတွေနေတဲ့ရွာကများတယ် စစ်ဘေးရှောင်နေရတာ ကချင်က နဲနဲရယ် မင်းတို့က မြှောက်ထိုးကော်ပင့် လုပ်နေ တာ သူများကိုမြှောက်ပေးမယ့်အစား မင်းတို့တိုက်ပွဲလာဝင်ကြပါလား